ko htike's prosaic collection: mail for U Aung Lin Htut and friends
Posted by ကိုထိုက် at 14:35
He is complete FANTASIST and I would not believe him if he told me the sun set in the west.
Absolutely Rubbish!! Suchalow trash.
ဒီ Road Map ဆိုတဲ့ပေါက်ကရမြေပုံဟာ ထောက်လှမ်းရေး စစ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဌာနက ထွက်လာတဲ့ဘရုတ်သုတ်ခပါ နောက်ပြီးခင်အွှန့်များ ရွေးကောက်ပွဝြင်အရွေးခံဖို့ အောင်လင်းထွဍ် စည်းရုံးရေးဆင်းနေတယ်နဲ့တူတယ် တဖက်လှည့်နဲ့ ခင်ညွှန့် ပါတီထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်နဲ့ တူတယ် ၈၈ အရေးအခင်းမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းနိုင်အောင် ဆူပူအကြမ်းဖက် ခေါင်းဖြတ်တဲ့ အဆင့်မျိုးရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာ ထောက်လှမ်းရေးတွေပါ ဗိုလ်ကြီးစည်သူ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တသိုက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ယုတ်ယုတ်မာမာ ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေနဲ့ ကုန်ဈေးတန်းတ၀ိုက်မှာ ဖမ်းမိခဲ့တာ သာဓကပါ။ ခေါင်းဖြတ်မှုတွေမှာ ရှေ့ဆုံးက မဖြတ်ဖြတ်အောင်လှုံဆော်တဲ့ သူတွေဟာ ထောက်လှမ်းရေးကတပ်ကြပ်ကြီးတွေပါ ပြီးတော့လူတွေ သွေးကြွပြီးဝင်လာတော့ သူတို့က လက်ရှေင်သွားတယ် အရေးအခင်းပြီးတော့ ခေါင်းဖြတ်တဲ့ လူတွေ တရားစွဲရုံးတင်တော့ သက်သေအဖြစ်နဲ့ပါလာကြတော့ ဒင်းတို့က ထောက်လှမ်းရေးကကောင်တွေဖြစ်နေတယ် ထောက်လှမ်းရေးက ဒီမိုကရေစီလိုခြင်တယ်တဲ့ အောင်လင်းထွဍ်ရယ် တခြားဟာနဲ့ လိမ်ပါအုံးကွ မင်းကနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လည်းယူသေးတယ် မာန်လဲမချ ထောက်လှမ်းရေး ကောင်းပါတယ် လုပ်နေတော့ မင်းတို့စစ်တပ်ကကောင်ဆိုတာ စောက်ရှက်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်
"Moe Ma Kha" is absolutely right.He's sucharubbish.
မင်းတို့ကစောက်ပြစ်တင်ဖို့ပဲပြောနေတာ၊ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုယ်ဘက်ပါအောင်စည်းရုံးဖို့စိတ်မကူးဘူး၊ နအဖ ဘက်တော်သားတွေဒီမိုကရေစီဘက်ပါခြင်တယ်၊ ကိုယ်လဲဘာမှစောက်သုံးမကျဘူး သူများကိုပဲလေကန်ခြင်နေတာ။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ မရတာ နအဖ ကြီးပဲမဟုတ်ဘူး၊အာခြောင်ပြီး လက်တွေ့ ဘာမှမလုပ်တဲ့ စောက်ပေါတွေလဲပါတယ်
မာ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့  ဘ၀တွေ အသက်တွေကိုဖျက်ဆီး
မာမျိုးဆက်တွေ သင်ခန်းစားယူနိုင်အောင်လို့။ မင်းတို့ရဲ့ 
မိုက်ကြွေးကို မင်းတို့ရဲ့ သွေးချွေးတွေနဲ့ဆပ်ကြ။ မှိန်းစား
30 July 2008 at 09:30
ခင်ဗျား တော်တော် မျက်စိနောက်အောင် ပေါက်ကရရေးတဲ့လူပဲ။ ခင်ဗျားကို ခင်ဗျား ဘာများအောင့်မေ့နေလို့ အတွင်းစည်းဝင်မရဘူးပြောရအောင် ... ခင်ဗျားရူးနေလား။ ဘယ်သူက အတွင်းစည်း အပြင်စည်း ဝင်တယ် ထွက်တယ် သတ်မှတ်နေလို့လဲ။ ခင်ဗျား သတ်မှတ်တာလား အတွင်းစည်းဆိုတာကို ..။ အဲဒါဆို ပူမနေနဲ့ ဘယ်သူမှ မလာဘူး။ bullshit တွေ များနေတဲ့ ခင်ဗျား စည်းထဲ ချေးစော်နံလို့ ဘယ်သူမှ မလာဘူး။ သူများတကာ ရေးနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်က တခြား၊ ခင်ဗျား လာပြောနေတာ တခြား။ စကားလုံး အကြောင်းအရာကို ပြောနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မိအောင် အရင် ပြောတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ဦး။
လူရာမဝင်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှုတွေ လာရေးနေတာ ခင်ဗျားကို ဘယ်နေရာမှ သုံးမရဘူးဆိုတာ သက်သေပြနေတာပဲ။
ခင်ဗျား ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်ကို အသားလွတ် မုန်းနေပုံရတာသေချာတယ်။ ဟိုအရင် ပို့စ်တွေကတည်းက သူ့ကို ဘယ်လို တိုက်ခိုက်ရမလဲ ရေးနေတာတွေပဲ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ ဘာလုပ်မယ် ရေးတာ မတွေ့ရဘူး။
အဲဒီလောက် မုန်းနေရင်လည်း ဒီနေရာကို အလည်မလာပဲ နေပေါ့ ... မဟုတ်ဘူးလား။ ခင်ဗျား လန်ဒန်မှာ အခွင့်အရေးယူထားပြီး ခွဒေါင်းလုပ်နေတာကို ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်က သိလို့ ဖေါ်ထုတ်ထားတာကို တော်တော်ခံပြင်းနေတာနဲ့တူတယ်။ ဘာမှ လျှောက်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့။ ကိုယ်လုပ် ကိုယ်ခံပေါ့။
burmese bullshit cleaner
Whenever I see their faces( members of Junta, families of Junta ), hear their voices, read about them, I feel sick like I am seeing dog's shit.
I will never ever believe their lies.
မင်းတို့လို ခိုလှုံခွင့်ရချင်လို့ တော်လှန်ရေးကိုခုတုန်း
ဘယ်သူကဘာ၊ ဘယ်သူကဘယ်ခြေလှမ်းဆိုတာ ငါတို့
အားလုံးသိတယ်။ အပြောက်ရိုက်ရတဲ့ ကိုထိုက်တို့လည်း
ပါသပေါ့ကွာ။ လုပ်စားနေတဲ့ ငအောင်တို့။ စောက်ရူးထမိ
သားစု ၀င်းနိုင်တို့၊ မင်းတို့ကိုလွှတ်ထားတာကြာပါပြီး။ ဒါ
ပေမယ့် ယခုအချိန်အခါလို တိုင်းပြည်အတွက်
တယ်။ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ
2 August 2008 at 01:41
ဒီနေရာမှာ သုံးသတ်မိတဲ့အချက်တစ်ခုက မင်းတို့လို
ကျော်ဆန်းလက်ထွက်၊ဖေကံကေင်းရဲ့ တပြည့်တွေရဲ့ 
လေသံက တစ်ပေါက်ထဲပါလားဟေ့ ဟေ....။
ကိုထိုက်ရေ၊ သိကြားမင်းကြီးရဲ. ၀ရဇိန်ပြင်နေတုငန်းပဲတဲ့၊ သတင်းပလင်း လိုက်စုရင် သတိလည်းထားဦး၊ အလိမ်ခံရတတ်တယ်။
4 August 2008 at 11:19
I don't understand why people are fighting each other by using rude words on the blog. There are only two groups which are SPDC and Democracy. I found some people who are in no one side and blaming both sides. Beware of those kind of people.
htike is right.we are always behind you
26 March 2009 at 03:19